Ping တော့ reply ပြန်ပါရဲ့ဗျာ.. — MYSTERY ZILLION
Ping တော့ reply ပြန်ပါရဲ့ဗျာ..
ကျွန်တော့ဆီက စက်တစ်လုံး window ပြန်တင်ပြီး ပြန်သုံး ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါမယ့် စက်က အင်တာနက်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ
IP . Gateway . Subnet အားလုံး သိတယ်ခင်ဗျ
Gateway ကို Ping တော့လဲ reply ပြန်တယ်
ဒါပေမယ့် အင်တာနက် သုံးလို့ကိုမရဘူး
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်ပဲ ဘာမှားနေလဲ မသိဘူးခင်ဗျ .. ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးဗျာ
DNS setting ကိုစစ်ကြည့်ပါဦး။ အဲဒါမှားနေရင် Internet မရဘူးဗျ။
အင်း ဟုတ်တယ်ဗျ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ပဲ
DNS IP Gateway
အားလုံး မှန်တယ် ဒါမယ့် homepage ကိုမပေါ်တာ
Home page မပေါ်ဘူးဆိုတာက.. Home page ကိုဖွင့်လိုက်ရင် The Page cannot be found ဆိုပြီးပေါ်တာမျိုးလား
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ LAN setting ထဲမှာ proxy ထည့်ဖို့ကျန်နေတေးလို့ဖြစ်မယ်
အဲ့လိုလည်းမပေါ်ဘဲနဲ့ connecting ပဲပြနေရင်တော့ အဲ့ဒါကကော်နက်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်ဖို့များပါတယ် ။
ဖြစ်တာကြာဘီလား.. ဒီနေ့မှစဖြစ်တာလား.. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ညနေစောင်းလောက်မှဖြစ်ဖြစ်တခါထပ်စမ်းကြည့်ပါလား
အခုရက်ပိုင်းက ကော်နက်ရှင်လည်းတော်တော်လေးကိုမကောင်းဘူး ။
လိပ်မလေးတုန်းကတော့ မနက်ဖြစ်ရင် ညနေလောက်ပြန်ရသွားတတ်တယ်..
LAN Setting မှာလဲ proxy ထည့်ပါတယ်ခင်ဗျ .. ဖြစ်တာက မနေ့လောက်ကတည်းးက ခင်ဗျ ညဘက်စမ်းတာလဲမရဘူးခင်ဗျ ..
IP . Gateway . Subnet အားလုံး သိတယ်
Gateway ကို Ping တော့လဲ reply ပြန်တယ်ဆိုရင်
Req Test 1. ping www.google.com ဆိုရင်ရော reply ရလား။
Home page မပေါ်ဘူးဆိုတာက ဘယ် Website ကိုဖွင့်တာလဲ....
Req Test 1. www.google.com ဆိုပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ
မိမိသုံးသော Browser က Internet Explore or Mozilla Firefox?
Res 1. Browser ရဲ့ Tools> Options မှာ Proxy Setting ကိုပြောင်းကြည့်ပါ။
choose . No Proxy
choose . Auto Detect
choose . Manual
မိမိသုံးနေသော Computer ADSL or Broadband?
Res 2. Network configurations ကိုသွားပြီး Dynamic ဖြစ်နေရင်
Static အဖြစ် ပြောင်းရိုက်ထည့်ပြီး စမ်းသပ်ပါ။
Static ဖြစ်နေရင် Auto Detect ကိုပြောင်းပါ။
မိမိသုံးထားသော Antivirus or Firewall အားစစ်ပါ။
Res 3. ကွန်ပျူတာမှာ ထည့်သွင်းထားသော Antivirus နဲ့ Firewall အားစစ်ပါ။
သူတို့က မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ Network ကို ပိတ်ထားတတ်တယ်။
ဆိုလိုတာက မိမိက ကွန်ပျူတာ အသစ်တစ်လုံး ဆင်တယ်. Antivirus အသစ်ဆိုရင်
ကွန်ပျူတာ Network စသုံးတဲ့ အချိန်မှာ မိမိရဲ့ network အား public access, private access စသည်ဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိကွန်ပျူတာ အင်တာနက် IP အား အသုံးပြုခွင့် မပြုခြင်းတို့ကို Antivirus Program တစ်ချို့ပါ Network filtering section တို့မှ မေးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှတ်မထင် No လို့ ဖြေလိုက်ရင် အင်တာနက်သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါမျိုးက Kaspersky Internet Security နဲ့ Bitdefender Internet Security တို့မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် စက်တွေ လည်း အဲဒီလို ခဏခဏ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ..အဲဒါဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ တော့ ကျွန်တော်လည်း အဖြေရှာ မရသေးဘူးဗျာ.. ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဖြစ်လို့ရင် ဖြစ်တဲ့ စက်ရဲ့ IP address ကို တခြားလွတ်တဲံ့ address နဲ့ ပြောင်းပေး လိုက်ရင် .. အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် ရသွား ပြန်တယ်.. ဗျ...အဲလိုကြီး ခဏခဏ ချိန်းနေရတော့ ကျွန်တော်လည်း တော်တော် စိတ်ညစ်နေပြီဗျာ.. အဲဒီ အဖြေလေး ကို ၀ုိင်း စဉ်းစားပေးကြပါအုံးဗျ...:77::77:
အကိုရေ.. Network configurations ကိုသွားပြီး Dynamic ဖြစ်နေရင်
လို့ ပြောထားတယ်နော်.. Network configurations က ဘယ်က နေ၀င်ရတာလဲ ဆိုတာ ကို အတိအကျလေး ပြောပေးပါလားဗျာ.. ကျွန်တော်ရှာတာ မတွေ့လို့နော်. ကျွန်တော်က လည်း ဘာမှ သိပ်မသိတာ လဲ ပါပါတယ်..ဗျာ..အဲဒီလိုလေး စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဗျ... ပြောပေးအုံးနော်....ဘယ်က နေ ဘယ်လို ၀င်ရတယ် ဆိုတာ ကိုနော်....:6::6:
Originally Posted by brb_1984 View Post
အကိုရေ တိုက်ဆိုင်မဆိုင်လာတော်မသိဘူ။ ကျွန်တော််စက်မှာ ကတော ့cmos bettery အာနည််တာ computer date and time မှာနေလို gtalk တို gmail တို၀င်လို မရဘူ နောက်တော ကျွန်တော် date and time တွေ change လိုက်တော gmail ရော gtalk ရော ပြန်ရတယ်။ပြန်ရလာမရလာတောမပြောတက်ဘူနော် ကျွန်တော်စက်မှာဖြစ်တာလေပြောပြတာ
:14:ဟုတ်ကဲ့ ကိုရေလိုအေးရေ.... Date and Time လွဲရင်တော့ Gtalk ရော gmail ေ၇ာ အပြင် kaspersky သုံးထားရင်လည်း ကီးတွေ ကိုထည့်လို့ မရပါဘူး အမြဲတမ်း blacklist ဖြစ်တယ်လို့ ပြနေတာပါ.. အဲဒါ တွေ ကို ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးပါတယ်.... အခု ဟာ က အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး.. စက်တွေက အခု မှ အသစ်တွေ ပါ... ဘာကြောင့်လည်းတော့ အဖြေ မသိသေးပါဘူးဗျာ......ကူကြပါအုံး....:77::77:
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ အဲ့မျိုးလဲ ကျွန်တော်ဖြစ်ဖူးပါတယ် ဒါမယ့် ခုဟာက ဘယ်လို ၀က်ဘ်ပေ့ချ် မျိုးကိုခေါ်ခေါ်မရတာပါဗျာ ..
အကုန်နီးပါးတော့စစ်ပီးပီ ဒါမယ့် (:((:((
ကိုအေးချိုရဲ့နက်၀ပ်မှာ ကိုယ်ပိုင် Proxy ထောင်ထားတာလားခင်ဗျ။ ပုဂံနက်မှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ proxy မသုံးရဘူးနော်။ ကိုယ်ပိုင် proxy နဲ့ဆိုရင် proxy မသုံးပဲ router ကိုတိုက်ရိုက် network cable နဲ့ မရတဲ့စက်ကိုချိပ်ကြည့်ပါလား။ အဆင်ပြေပါစေ
ကျွန်တော့်ဆီမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်နဲနဲတော့ကွာတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်က server ကို run box မှာ \_\_servername နဲ့ခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ip နဲ့လဲခေါ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် internet တော့ရတယ်။ server က တော့ ISA ပဲတင်ထားတာပါ၊ server run ပြီးခနနေရင်အဲဒီလိုဖြစ်တာပဲဗျာ။ restart ချလိုက်ရင်တော့ပြန်ကောင်းသွားပြီး ခနနေရင်ပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဗျာ။ သိရင်ပြောကြပါဦး။ virus ကြောင့်လား network ကြောင့်လားမသိပါဘူးဗျာ...
ToxicImmuner wrote: »
ISA server ကို ခေါ်တာ လား.. ဒါဆို ISA firewall ကို ပြန်စစ်လိုက်ပါနော်... internal ကို allow ပေးထားလား ဆိုဒါ..
အခုကျွန်တော်သုံးတာက MPT က အိုင်ပီစတားပါခင်ဗျ ကိုယ်ပိုင် proxy မထောင်ထားပါဘူး ဒီတိုင်း router ကို တိုက်ရိုက်ပဲချိတ်ထားတဲ့ စက်ပါခင်ဗျ
nslookup ခေါ်လို့ DNS ကျလား.. မကျရင် Internet မထွက်လို့.. server ထိုင်ထားလား..
server ရှိရင် ဘာ server လုပ်ထားလဲပေါ့နော်... DNS မှာ ns0.myantel.net.mm
အောက်မှာ 203.81.71.69 (Bagan connection) ဆိုရင် ကောင်းပြီး.. server ဆိုရင် တမျိုးစဉ်းစားမယ်နော်...
MPT IPStar ဆိုရင် router မှာ Gateway ကို 172.20.40.89
အဲဒါထည့်ပေးပါ. computer မှာလဲ DNS ထည့်ပေးပါ...
Browser မှာက Proxy ကို 203.81.64.34 :8080 ဒါဆို Ok ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါနော်..
ဒါလေး တချက်ကြည့်ပြီး install လိုက်ပါဗျာ။ Microsoft security hotfix လေးပါ။
Install ပြီး reboot လုပ်ရပါတယ်။
ဝိုင်းကူတဲ့လူတွေ ပိုပြီး clear image ရအောင် ကျနော်သူ့ကို check ခိုင်းပြီးတလောက် ပြောပြမယ်ဗျာ။
Ping ကရနိုင်တလောက် အထိအကုန်ရတယ်ဗျာ Network ကြောင့်လဲမဟုတ်ဖူး။
DNS ကြောင့်လို့ထင်လို့ IP နဲ့ browse ခိုင်းတော့ http://209.85.171.104 လဲမရဘူးလို့ပြောတယ်။ အဲဒါ google IP ဗျာ။ အဲတော့ DNS issue မဟုတ်ပြန်ဖူး။
Anti-virus exit လုတ် Windows Firewall off ပြီးလဲမရဘူး။ Application issue လဲမဟုတ်ပြန်ဘူး။
ကျနော့ conclusion က IE setting / Gateway filter တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ မသိဘူးဗျာ :D:D
အခုတော့ Firefox download လုတ်ခိုင်းထားတယ်။ ခဏနားရတာပေါ့ :P:P:P
ဟုတ်တယ်ဗျ ကျွန်တော်နားမရှင်းတာက windows အသစ်တင်ထားတယ်ပြောတယ် ဒါဆိုရင် setting အားလုံးက default ပဲ။(တကယ်ဘာမှမပြင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ ) Antivirus တင်ထားလဲ web browsing ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဘာများဖြစ်နေတာလဲမသိဘူး တော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်။ internet က login လုပ်မှရတဲ (ဥပမာ။ ။ PPPoE) လိုဟာ မျိုးလားမသိဘူး အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ Ipstar အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်သိပ်မသိဘူးဗျ။:D
MPT IPStar ဆိုတော့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ IP တွေ ထည့်ပြီးသွားပြီလား မသိဘူးနော်...
MPT IPStar က အဲဒါတွေလိုလို့ပါ...